Saldhiga Millateri ee Turkiga ka dhisanaayo Somaliya oo meel gabo gabo ah maraayo | Baydhabo Online
Saldhiga Millateri ee Turkiga ka dhisanaayo Somaliya oo meel gabo gabo ah maraayo
Turkiga ayaa meel gabo gabo ah marsiinaya Saldhig Millateri oo ay ka dhisanayaan gudaha Somaliya, kaasi oo noqonaya Saldhigii ugu horeeyay ee Millateri ee Turkiga uu ka sameysto Africa.
Saldhigaan Millateri ayaa martigelin doona, Saraakiil u dhalatay dalka Turkiga oo tababaro siin doona ciidamada Dowladda Federalka Somaliya, kuwaasi oo ka caawin doona tababar heerkooda sareeya, si ciidanka Xooga dalka Somaliya ay ugu guuleystaan dagaalka ay kula jiraan Ururka Al Shabaab.
Qaramada Midoobay ayaa Dowladda Turkiga u ogolaatay in gudaha Somaliya ay ka sameysan karto Saldhigaan Millateri ee lagu tababaraayo ciidamada Dowladda Federalka Somaliya, iyadoo tani banaanka ay soo dhigeyso sida Dowladda Turkiga ay kaga go’an tahay muujinta taageerada Somaliya.
Turkiga waxa uu Somaliya ka dhistay Safaarad weyn oo ah mida Afrika ugu weyn ee Turkiga uu ku leeyahay, Safaaradaasi waxa ay ku taalaa Degmada C/casiis, gaar ahaan meel u dhaw Xeebta Liido.
Sida qorshaha uu yahay marka la dhameystiro Saldhigaan Millateri ee Turkiga uu Somaliya ka dhisanaayo waxaa imaan doona Saraakiil Turki ah oo tiradooda ay gaareyso 200 oo Saraakiil ah, waxaana wajiga koowaad lagu tababari doonaa Askar gaareysa 10,500 oo Somali ah.
Turkiga ayaa Somaliya hada ka caawinaayay dhanka Millateriga , hadii ay tahay tababarida Saraakiisha ciidanka Somalida iyo dhaqaale siinta Hay’adaha ammaanka Dowladda Federalka Somaliya.
Dowladda Somaliya iyo Dowladda Turkiga ayaa waxaa ka dhaxeeya Xiriir wanaagsan oo ku aadan wada shaqeyn dhexmarta labada ciidan, iyadoo Dowladda Turkiga ay horay u balan qaaday inay sii laba jibaari doonto taageerada ay siiso Somaliya.